လိုသုံးတွေနားပါ ငါ့ဘဝထဲကထွက်သွားကြ - For her Myanmar
ယူတို့ဘာသာ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ ထွက်သွားရင်ထွက်သွားနော် မသွားရင်တော့….
ဘဝမှာ စိတ်အညစ်စရာအကောင်းဆုံး ကိစ္စက ကိုယ့်ဘက်ကသူငယ်ချင်းလို့ ကောင်းကောင်းသတ်မှတ်ပြီး အေးအတူအပူမျှ အရာရာအတူဖြတ်ကျော်ပြီး ဖေးမပေးခဲ့တဲ့ အဲဒီလူက ကိုယ့်ကိုလိုသုံးလုပ်သွားတဲ့ ကိစ္စပဲ။ ကိုယ့်မှာတော့ သူ့ရဲ့အပူတွေကို ကိုယ့်အလုပ်ချိန်တွေကနေဖြစ်စေ ဖယ်ပြီးပေးခဲ့ အတူစဉ်းစားပေးခဲ့ပေမဲ့ သူ့ဘက်ကတော့ ကောင်းတဲ့ကိစ္စဆို တစ်ခုတစ်လေလေးတောင် ကိုယ့်ကိုအသိမပေးဘဲ သူများဆီကနေမှတဆင့် သိလိုက်ရသောအခါ… ကောင်းခြင်းတွေကို မျှဝေခံစားရမှ မဟုတ်ပါဘူး.. အသိလေးပေးရင်တောင် ကျေနပ်နေပြီဟာကို… ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကျ ပေါ်မလာဇာတ်တွေခင်း.. ပြဿနာတက်ပြီဆိုတော့မှ ရောက်လာတော့…
တကယ်ဆိုရင်လေ ယူတို့တွေ ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းသတင်းတွေကို မမျှပေးချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အပူတွေလည်း လာလာမပေးသင့်ဘူးလေ.. ဘယ်လောက်ပဲ သည်းခံနိုင်တယ်ပြောပြော ကိုယ်သည်လည်း လူထဲက လူပဲမဟုတ်လား။ တစ်ခါ နှစ်ခါ လောက်ဆို စိတ်ကအဆင်ပြေသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပူရှိတိုင်းတော့ လာလာကပ်ပြီး ကောင်းသတင်းကျတော့ သူများဆီကနေပဲ တစ်ဆင့်တစ်ဆင့် သိရတဲ့အကြိမ်ရေများလာတော့ ဘယ်သူကသည်းခံနိုင်တော့မှာလဲ။ ပြီးရင် မိအေးအော်တာပဲ လူကကြားတာ အောက်မှာ ကဏန်းညှပ်နေတာတော့ ဘယ်သူမှမမြင်ကြဘူးလေ။ သည်းမခံနိုင်ဘဲ ပြောမိဆိုမိတော့ ကိုယ်ကလူဆိုးကြီးပဲဖြစ်ရော။
သူများတွေ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆိုတာကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲတော့ မသိဘူး။ အိုင်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အအေး၊ အပူမှန်သမျှကို အတူမျှဝေပြီး အချိန်တိုင်းမှာ အတူမရှိနိုင်၊ စကားတွေမပြောနေနိုင်ရင်တောင် ကိုယ်သွားပြောတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ့်အကြောင်းကို အူမချေးခါးကအစသိပြီး အစကနေပြန်ပြန်မဖော်ရလောက်တဲ့အထိ ကိုယ့်စိတ်ကို ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့လူမျိုး၊ ကိုယ့်အပူတွေကို ယုံယုံကြည်ကြည်မျှဝေလို့ရပြီး သူ့အပူတွေကိုလည်း ကိုယ့်ကိုတစ်လုံးမကျန် ဖွင့်ပြောတတ်တဲ့လူမျိုး၊ ပျော်စရာရှိရင်လည်း ကိုယ့်ထက်သူက ပိုပြီးပျော်ပေးနိုင်တဲ့ လူမျိုးကို အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းအနေနဲ့ သတ်မှတ်တာပါ။
ပြဿနာရှိမှဒီကို ခေါင်းလာတည်ပြီး ကျန်တဲ့အချိန်ကျရင် ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်နေမှန်း မသိတဲ့လူမျိုးကို သူငယ်ချင်းအဆင့်မဟုတ်ဘဲ လိုသုံးလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်နော်။ အာ့ကို BFF (Best Friend Forever = တစ်သက်လုံးအတူ မခွဲမခွာပေါင်းသွားမယ့် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း လို့နာမည်မတပ်ပစ်ပါနဲ့။ အဇမ်းရွံပြီး အားကြီးစိတ်ဆိုးပါတယ်နော်။)
Related Article >>> မတွေ့ချင်ဘူးပြောတာ မခင်လို့မဟုတ်ပါဘူး သူငယ်ချင်း
အဲ့တော့ လိုသုံးမမတို့ရယ် ဖြစ်နိုင်ရင် ဘဝထဲကိုဝင်ဝင်မလာကြပါနဲ့လား။ ကိုယ်ကတော့ အားနာရင်းနာရင်း ခါးကပါလို့ပါမှန်းကို မသိတတ်ပေမဲ့ ပါတာများလာတော့ လူကသိပ်စိတ်မရှည်ချင်တော့ဘူး။ ပြောဖို့ပါးစပ်က ပြင်လာရောလေ။ ပြီးတော့ အိုင်တို့လိုလူမျိုးတွေက ကူညီရင်လည်း အစွမ်းကုန်ကူညီတတ်သလို ပြောပြီဆိုပြီဆိုရင်လည်း ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ ထွေထွေထူးထူးလှည့်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘဲ ပြောလိုက်ဆိုလိုက်မှာမို့ အဲဒီလို စကားတွေမထွက်ခင် အမြန်ဆုံးဘေးနားကနေထွက်သွားပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်နော်။ ပြီးမှ နှုတ်သီးကောင်းတယ်၊ လျှာပါးတယ်လို့ လာလာလက်ညှိုးမထိုးပါနဲ့။ အင်္ဂုလိမာလဇာတ် ခင်းပစ်လိုက်မှာပါလို့ ဟုတ် :3
ယူတို့ဘာသာ ကိုယျ့အသိစိတျနဲ့ ထှကျသှားရငျထှကျသှားနျော မသှားရငျတော့….
ဘဝမှာ စိတျအညဈစရာအကောငျးဆုံး ကိစ်စက ကိုယျ့ဘကျကသူငယျခငျြးလို့ ကောငျးကောငျးသတျမှတျပွီး အေးအတူအပူမြှ အရာရာအတူဖွတျကြျောပွီး ဖေးမပေးခဲ့တဲ့ အဲဒီလူက ကိုယျ့ကိုလိုသုံးလုပျသှားတဲ့ ကိစ်စပဲ။ ကိုယျ့မှာတော့ သူ့ရဲ့အပူတှကေို ကိုယျ့အလုပျခြိနျတှကေနဖွေဈစေ ဖယျပွီးပေးခဲ့ အတူစဉျးစားပေးခဲ့ပမေဲ့ သူ့ဘကျကတော့ ကောငျးတဲ့ကိစ်စဆို တဈခုတဈလလေေးတောငျ ကိုယျ့ကိုအသိမပေးဘဲ သူမြားဆီကနမှေတဆငျ့ သိလိုကျရသောအခါ… ကောငျးခွငျးတှကေို မြှဝခေံစားရမှ မဟုတျပါဘူး.. အသိလေးပေးရငျတောငျ ကနြေပျနပွေီဟာကို… ဒီလိုအခွအေနမြေိုးကြ ပျေါမလာဇာတျတှခေငျး.. ပွဿနာတကျပွီဆိုတော့မှ ရောကျလာတော့…
တကယျဆိုရငျလေ ယူတို့တှေ ကိုယျ့ရဲ့ကောငျးသတငျးတှကေို မမြှပေးခငျြတဲ့ လူတဈယောကျကို အပူတှလေညျး လာလာမပေးသငျ့ဘူးလေ.. ဘယျလောကျပဲ သညျးခံနိုငျတယျပွောပွော ကိုယျသညျလညျး လူထဲက လူပဲမဟုတျလား။ တဈခါ နှဈခါ လောကျဆို စိတျကအဆငျပွသေေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အပူရှိတိုငျးတော့ လာလာကပျပွီး ကောငျးသတငျးကတြော့ သူမြားဆီကနပေဲ တဈဆငျ့တဈဆငျ့ သိရတဲ့အကွိမျရမြေားလာတော့ ဘယျသူကသညျးခံနိုငျတော့မှာလဲ။ ပွီးရငျ မိအေးအျောတာပဲ လူကကွားတာ အောကျမှာ ကဏနျးညှပျနတောတော့ ဘယျသူမှမမွငျကွဘူးလေ။ သညျးမခံနိုငျဘဲ ပွောမိဆိုမိတော့ ကိုယျကလူဆိုးကွီးပဲဖွဈရော။
သူမြားတှေ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးဆိုတာကို ဘယျလိုသတျမှတျထားလဲတော့ မသိဘူး။ အိုငျကတော့ ကိုယျ့ရဲ့အအေး၊ အပူမှနျသမြှကို အတူမြှဝပွေီး အခြိနျတိုငျးမှာ အတူမရှိနိုငျ၊ စကားတှမေပွောနနေိုငျရငျတောငျ ကိုယျသှားပွောတဲ့အခြိနျတိုငျးမှာ ကိုယျ့အကွောငျးကို အူမခြေးခါးကအစသိပွီး အစကနပွေနျပွနျမဖျောရလောကျတဲ့အထိ ကိုယျ့စိတျကို ကောငျးကောငျးနားလညျတဲ့လူမြိုး၊ ကိုယျ့အပူတှကေို ယုံယုံကွညျကွညျမြှဝလေို့ရပွီး သူ့အပူတှကေိုလညျး ကိုယျ့ကိုတဈလုံးမကနျြ ဖှငျ့ပွောတတျတဲ့လူမြိုး၊ ပြျောစရာရှိရငျလညျး ကိုယျ့ထကျသူက ပိုပွီးပြျောပေးနိုငျတဲ့ လူမြိုးကို အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးအနနေဲ့ သတျမှတျတာပါ။
ပွဿနာရှိမှဒီကို ခေါငျးလာတညျပွီး ကနျြတဲ့အခြိနျကရြငျ ဘယျရောကျလို့ဘယျပေါကျနမှေနျး မသိတဲ့လူမြိုးကို သူငယျခငျြးအဆငျ့မဟုတျဘဲ လိုသုံးလို့ပဲသတျမှတျပါတယျနျော။ အာ့ကို BFF (Best Friend Forever = တဈသကျလုံးအတူ မခှဲမခှာပေါငျးသှားမယျ့ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြး လို့နာမညျမတပျပဈပါနဲ့။ အဇမျးရှံပွီး အားကွီးစိတျဆိုးပါတယျနျော။)
Related Article >>> မတှခေ့ငျြဘူးပွောတာ မခငျလို့မဟုတျပါဘူး သူငယျခငျြး
အဲ့တော့ လိုသုံးမမတို့ရယျ ဖွဈနိုငျရငျ ဘဝထဲကိုဝငျဝငျမလာကွပါနဲ့လား။ ကိုယျကတော့ အားနာရငျးနာရငျး ခါးကပါလို့ပါမှနျးကို မသိတတျပမေဲ့ ပါတာမြားလာတော့ လူကသိပျစိတျမရှညျခငျြတော့ဘူး။ ပွောဖို့ပါးစပျက ပွငျလာရောလေ။ ပွီးတော့ အိုငျတို့လိုလူမြိုးတှကေ ကူညီရငျလညျး အစှမျးကုနျကူညီတတျသလို ပွောပွီဆိုပွီဆိုရငျလညျး ဘယျသူ့မကျြနှာမှ ထှထှေထေူးထူးလှညျ့ကွညျ့နမှောမဟုတျဘဲ ပွောလိုကျဆိုလိုကျမှာမို့ အဲဒီလို စကားတှမေထှကျခငျ အမွနျဆုံးဘေးနားကနထှေကျသှားပေးကွပါလို့ တောငျးဆိုပါတယျနျော။ ပွီးမှ နှုတျသီးကောငျးတယျ၊ လြှာပါးတယျလို့ လာလာလကျညှိုးမထိုးပါနဲ့။ အင်ျဂုလိမာလဇာတျ ခငျးပဈလိုကျမှာပါလို့ ဟုတျ :3
Tags: bff, fake, friends, Friendship, get, life, my, of, out, ruined